Otú M Si Mụta Eziokwu Dị na Baịbụl n’Agbanyeghị na Enweghị M Aka | Akụkọ Ndụ
Ụlọ Nche | Nke 6 n'Afọ 2016
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zande Zulu
Otú M Si Mụta Eziokwu Dị na Baịbụl n’Agbanyeghị na Enweghị M Aka
Akụkọ Bernhard Merten kọrọ
Ọ bụrụ na e nwee ihe chọrọ ịkwatu mmadụ, onye ahụ na-achọ ihe ọ ga-ejide aka ka ọ ghara ịda. Ma, ihe chọọ ịkwatu m, m ga-ada n’ihi na enweghị m aka m ga-eji jide ihe. Mgbe m dị afọ asaa, e gbupụrụ m aka ka m nwee ike ịdị ndụ.
A mụrụ m n’afọ 1960. Mama m dị afọ iri na asaa mgbe ahụ. Papa m hapụrụ mama m mgbe ọ dị ime m. Mụ na mama m na ndị mụrụ ya bi n’obere obodo aha ya bụ Bọg. Obodo a dị n’ebe a na-akpọbu Jamanị nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ. Ọtụtụ ndị bí na Bọg ekweghị na Chineke dị. Ezinụlọ anyị kwetakwara na Chineke adịghị. Anyị achọkwanụghị ịma ma ọ̀ dị adị.
Mgbe m na-etolite, nna mama m anaghị eji m egwu egwu. Mụ na ya na-eso arụ ọtụtụ ọrụ ndị ọ na-arụ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-agwa m ka m rịa elu osisi gaa gbutusịa alaka ya. Ihe ndị ahụ mụ na ya na-eso aga arụ na-atọ m ụtọ. O nweghị ihe na-echu m ụra, obi na-abụkwa m sọ aṅụrị.
OTU ỌDACHI NKE GBANWERE NDỤ M
E nwere otu ihe dị egwu mere m otu ụbọchị mgbe m dị afọ asaa. Afọ ahụ ka bụ afọ nke abụọ m banyere ụlọ akwụkwọ. Mgbe m na-ala akwụkwọ n’ụbọchị ahụ, m rịgooro nnukwu poolu ọkụ eletrik. Mgbe m rịrị ya ruo mita asatọ, ọkụ eletrik dọrọ m, mụ atụbọọ, e buru m gaa ụlọ ọgwụ. Mgbe m tetara, m chọpụtara na aka m abụọ anwụọla. Ọkụ a rere aka m mebiri m aka nke na e gbupụrụ ya ka nje ghara isi na ha banye m n’ọbara. Ihe a wutere mama m na ndị mụrụ ya. Ma, ebe ọ bụ na m ka bụ nwata n’oge ahụ, amachaghị m nsogbu aka a e gbupụrụ m ga-emecha kpatara m.
Mgbe m pụtara n’ụlọ ọgwụ, alaghachiri m ụlọ akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ ibe m na-eji m eme ihe ọchị. Ha na-akwa m aka, ma na-atụ m ihe dị ka obere okwute. Ha ma na o nweghị ihe m nwere ike ime ha ebe ọ bụ na enweghịzi m aka. Ihe a niile ha na-eme m gbawara m obi. E mechara kpọga m Ụlọ Akwụkwọ Ndị Nwere Nkwarụ e nwere n’obodo Bikenwada. Ụmụ akwụkwọ e nwere n’ụlọ akwụkwọ a bi ebi na ya. Ụlọ akwụkwọ a dị ezigbo anya n’ụlọ anyị. Ọ bụ ya mere mama m na ndị mụrụ ya anaghị abịa eleta m n’ihi na ha enweghị ego ụgbọ ha ga-eji abịa. Naanị mgbe mụ na ha na-ahụ bụ ma anyị mechie akwụkwọ. Mụ na mama m na ndị mụrụ ya ebighị ruo afọ iri.
OTÚ M SI TOO N’ENWEGHỊ AKA
M bịara mụta otú m nwere ike isi jiri ụkwụ na-eme ihe ndị m gaara eji aka na-eme. Chegodị ihe ọ dị ka ya mmadụ iji ụkwụ jide ngaji ma were ya na-eri nri. O siiri m ike ịmụta otú m ga-esi jiri ụkwụ m na-eri ihe, ma m mechara mụta ya. M mụtakwara otú m ga-esi jiri ụkwụ m na-asa ezé, jirikwa ya na-abọ isi. Ọ na-abụkwa mụ na ndị mmadụ na-ekwu okwu, mụ ana-emegharị ụkwụ m iji gosi ihe m na-ekwu. Ejizi m ụkwụ m mere aka.
Mgbe m na-etolite, m na-agụkarị akwụkwọ ndị kwuru gbasara ihe ndị mmadụ chere ndị sayensi nwere ike imepụta. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị m ka ya bụrụ na ndị sayensi ga-arụpụta aka a na-akwụnye akwụnye m ga-eji na-eme ihe ọ bụla m chọrọ ime. Mgbe m dị afọ iri na anọ, m malitere ịṅụ sịga. M chere na sịga a m na-aṅụ na-eme ka m na-akata obi ime ihe ọ bụla. O mekwara ka m na-eche na m dị ka ndị ọzọ. Ọ dị ka à ga-asị na m na-ekwu, sị: ‘M ga-emeli ya. Ndị na-aṅụ sịga bụ ndị dimkpa, ma hà nwere aka ma ọ bụ na ha enweghị.’
M malitere iso ibe m na-eme ihe ndị a na-eme n’obodo. M banyere n’otu òtù ndị na-eto eto e nwere n’obodo anyị ma bụrụ odeakwụkwọ ha. Ọ bụ gọọmenti na-akwado òtù a. Ndị òtù anyị na-akwanyere odeakwụkwọ ùgwù. M banyekwara n’òtù ndị na-abụ abụ, sorokwa bụọ abụ n’ihu ọha. M sokwa mee egwuregwu ndị nwere nkwarụ na-eme. Emechakwara m mụọ ọrụ. Mgbe m mụchara ọrụ, m malitere ịrụ ọrụ n’otu ụlọ ọrụ dị n’obodo anyị. Oge m na-etolite, m na-akwụnyekarị aka ahụ a na-akwụnye akwụnye n’ihi na m chọrọ inwe aka otú ibe m nwere.
OTÚ M SI MALITE ỊMỤ BAỊBỤL
Otu ụbọchị m nọ na-eche ụgbọ okporo ígwè ga-ebu m gaa ọrụ, otu nwoke bịakwutere m. Ọ jụrụ ma m̀ ma na e nwere mgbe Chineke ga-eme ka m nweghachi aka. Ihe a ọ jụrụ m juru m anya. Ọ bụ eziokwu na m chọrọ ka m nweghachi aka, ma ihe ahụ ọ jụrụ m dị m ka ịmụ anya arọ nrọ. O doro m anya na Chineke adịghị. Si mgbe ahụ gawa, m malitere ize nwoke ahụ eze.
Mgbe oge ụfọdụ gachara, otu onye mụ na ya na-arụ ọrụ gwara m ka m bịa na nke ha, agakwara m. Ka anyị na-aṅụ kọfi n’ụlọ ha, ndị mụrụ ya malitere ikwu banyere Chineke, ma kwuo na aha ya bụ Jehova. Nke ahụ bụ nke mbụ m na-anụ na Chineke nwere aha. (Abụ Ọma 83:18) Ma, m nọ na-ekwu n’obi m, sị: ‘Chineke adịghị n’agbanyeghị ihe ọ bụla bụ aha ya. M ga-egosi ha na ihe ha na-ekwu abụghị eziokwu.’ Ebe ọ bụ na obi siri m ike na Chineke adịghị, m kwetara ka mụ na ha kwurịta banyere Baịbụl. Mgbe anyị na-ekwu banyere ya, o juru m anya na enwelighị m ike igosi ha na Chineke adịghị.
Ka anyị na-amụ banyere amụma ndị dị na Baịbụl, m bịara kwetawa na Chineke dị. Ọtụtụ amụma ndị dị na Baịbụl emezuola, n’agbanyeghị na e dere ha ọtụtụ narị afọ ma ọ bụ ọtụtụ puku afọ tupu ha emezuo. Otu ụbọchị anyị na-ekwu gbasara Baịbụl, anyị ji ihe ndị na-eme n’ụwa ugbu a tụnyere ihe ndị e kwuru na Matiu isi 24, Luk isi 21, na 2 Timoti isi 3. Otú ahụ ọ na-abụ dọkịta hụ otú ahụ́ si eme mmadụ ya ejiri ya chọpụta ụdị ọrịa onye ahụ na-arịa, ka ihe ndị ahụ Baịbụl kwuru m hụrụ ka ha na-eme n’oge a mere ka m mata na anyị bi n’oge Baịbụl kpọrọ ‘oge ikpeazụ.’ * Ihe ndị ahụ juru m anya. Ahụla m ka ihe ndị ahụ e kwuru na-eme.
Ọ bịaziri doo m anya na ihe m na-amụ bụ eziokwu. M malitere ikpere Jehova Chineke ekpere. M kwụsịkwara ịṅụ sịga, n’agbnyeghị na aṅụọla m ya ihe karịrị afọ iri. M nọgidere na-amụ Baịbụl ruo ihe dị ka otu afọ. Ma, n’abalị iri abụọ na asaa n’ọnwa Eprel, afọ 1986, e mere m baptizim na nzuzo n’otu nnukwu ihe a na-anọ n’ime ya asa ahụ́. Ihe mere e ji mee m baptizim otú ahụ bụ na gọọmenti Jamanị nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ machiri Ndịàmà Jehova ikpe okpukpe ha.
OTÚ M SI NA-ENYERE NDỊ ỌZỌ AKA
Ebe ọ bụ na gọọmenti machiri Ndịàmà Jehova ikpe okpukpe ha, anyị na-adị ole na ole na-amụ ihe n’ụlọ ụmụnna. Otú a anyị si amụ ihe mere ka m mara naanị ụmụnna ole na ole. Ma, e nwere otu ihe m na-atụghị anya ya mere otu ụbọchị. Gọọmenti obodo anyị nyere m akwụkwọ ikike ịga West Jamanị. Gọọmenti West Jamanị amachighị Ndịàmà Jehova ikpe okpukpe ha. Mgbe m ruru, eso m ọtụtụ puku ụmụnna anyị gaa mgbakọ ukwu. Nke a bụ nke mbụ m na-aga ụdị mgbakọ a. Ahụtụbeghị m ụdị ihe a mbụ.
Mgbe a kwatuchara mgbidi ahụ dị na Belin e ji kewaa Jamanị abụọ, gọọmenti wepụrụ iwu ahụ ha machiri Ndịàmà Jehova. Ugbu a, anyị na-efezi Jehova n’enweghị onye na-enye anyị nsogbu. M chọrọ iwepụtakwu oge na-ekwusa ozi ọma. Ma, ihere na-eme m ma m hụ ndị m na-ahụtụbeghị mbụ. M bịara chewe na ọtụtụ afọ m biri n’ụlọ akwụkwọ ndị nwere nkwarụ na aka m na-enweghị ga-eme ka o siere m ike ịga ozi ọma. Ma, n’afọ 1992, m gara ozi ọma rụta awa iri isii n’otu ọnwa. Eziri m ozi ọma nke ọma, obi tọkwara m ezigbo ụtọ. N’ihi ya, ekpebiri m na m ga na-arụ awa iri isii n’ọnwa ọ bụla. M gbakwara mbọ mee otú ahụ ruo ihe dị ka afọ atọ.
Anaghị m echefu ihe a Baịbụl kwuru echefu. Ọ sịrị: “Ònye bụ onye na-adịghị ike, m wee ghara ịbụ onye na-adịghị ike?”(2 Ndị Kọrịnt 11:29) N’agbanyeghị na enweghị m aka, m na-ekwu okwu, isi zukwara m okè. N’ihi ya, m na-agba mbọ na-enyere ndị ọzọ aka n’agbanyeghị na enweghị m aka. Ebe ọ bụ na enweghị m aka, m nwere ike imetere ndị ọnọdụ ha dị ka nke m ebere. Ama m otú ọ na-adị mmadụ ma e nwee ihe ọ chọrọ ime ma o nweghị ike ime ya. M na-akasi ndị nọ n’ụdị ọnọdụ a obi. Isi otú ahụ enyere ndị ọzọ aka na-eme m obi ụtọ.
Izi ndị ọzọ ozi ọma na-eme m obi ụtọ
JEHOVA NA-ENYERE M AKA KWA ỤBỌCHỊ
Nke bụ eziokwu bụ na e nwere mgbe obi na-anaghị adịcha m mma. Achọrọ m inwe aka ka ibe m. E nwere ọtụtụ ọrụ a na-arụ n’ụbọchị m na-arụ n’onwe m, ma m na-etinyekwu ike na oge ịrụ ha karịa ka m gaara etinye ma a sị na m nwere aka. Ihe m na-ekwukarị n’ụbọchị ọ bụla bụ: “N’ihe niile, enwere m ike site n’aka onye ahụ nke na-enye m ike.” (Ndị Filipaị 4:13) N’ụbọchị ọ bụla, Jehova na-enye m ike m na-eji arụ ọrụ ndị m na-arụ. Ihe a Jehova na-emere m gosiri na ọ hapụbeghị m. Ọ bụ ya mere na achọtụghị m ịhapụ ya.
Jehova ejirila ezigbo ezinụlọ gọzie m. Enweghị m ụdị ezinụlọ a mgbe m na-etolite. Alụtara m ezigbo nwaanyị. Aha ya bụ Elke. Ọ hụrụ m n’anya, nweekwa ọmịiko. Ihe ọzọ Jehova jirila gọzie m bụ ọtụtụ nde Ndịàmà Jehova e nwere n’ụwa niile. Ha niile bụzi ụmụnne m. Anyị niile dịkwa n’otu.
Ebe mụ na ọmarịcha nwunye m aha ya bụ Elke nọ
Ihe na-akasikwa m obi bụ nkwa Chineke kwere na ya ga-eme ka ụwa bụrụ Paradaịs. O kwukwara na ya ‘ga-eme ihe niile ka ha dị ọhụrụ.’ Aka m sokwa n’ihe ndị ọ ga-eme ka ha dịrị ọhụrụ. (Mkpughe 21:5) Mgbe ọ bụla m chebaara ihe ndị Jizọs rụrụ mgbe ọ na-eje ozi ya n’ụwa echiche, ọ na-eme ka m ghọtakwuo nkwa a Chineke kwere. Jizọs mere ka onye ngwọrọ gawa ije ozugbo, meekwa ka otu nwoke e bepụrụ ntị nweghachi ntị. (Matiu 12:13; Luk 22:50, 51) Ihe ndị ahụ Jehova kwuru ya ga-emere anyị na ọrụ ebube ndị ahụ Jizọs rụrụ emeela ka m kwetasie ike na m ga-enwetaghachi aka m n’oge na-adịghị anya.
Ma, ihe ọma kachanụ Jehova Chineke meerela m bụ na o mere ka m mata onye ọ bụ. Ọ bụzi nna m na enyi m, bụrụkwa ike m na onye na-akasi m obi. Ekwetakwara m ihe a Eze Devid kwuru. O kwuru, sị: “Jehova bụ ike m . . . E nyewokwara m aka, nke mere na obi m na-enwe aṅụrị.” (Abụ Ọma 28:7) O nwetụghị mgbe m ga-achọ ịhapụ eziokwu a m mụtara n’ihi na o nweghị ihe karịrị ya. Amụtadịrị m ya n’agbanyeghị na enweghị m aka.
^ para. 17 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ebe a kọwakwuru ihe ndị e ji ama na anyị bi n’oge ikpeazụ, gụọ isiokwu bụ́ “Ọgwụgwụ Ụwa Ọ̀ Dịla Nso?” Ọ dị n’isi nke 9 n’akwụkwọ bụ́ Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya. Ọ dịkwa n’Ịntanet na www.jw.org/ig.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú M Si Mụta Eziokwu Dị na Baịbụl n’Agbanyeghị na Enweghị M Aka
ISIOKWU TETA! A Ajụjụ Ndị Mmadụ Na-ajụ Gbasara Ndị Bí n’Eluigwe
ISIOKWU TETA! A Ọhụụ Ndị Mere Ka A Mata Ndị Bí n’Eluigwe
Ihe Anyị Na-amụta n’Aka Anụ Ufe nke Eluigwe
Lefèvre d’Étaples​—⁠Ọ Chọrọ Ka Ndị Nkịtị Mara Okwu Chineke
AKỤKỌ NDỤ Otú M Si Mụta Eziokwu Dị na Baịbụl n’Agbanyeghị na Enweghị M Aka
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Ihe Ọhụụ Ndị E Gosiri Banyere Eluigwe Na-akụziri Anyị
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Ihe Ọhụụ Ndị E Gosiri Banyere Eluigwe Na-akụziri Anyị
Ihe Ọhụụ Ndị E Gosiri Banyere Eluigwe Na-akụziri Anyị
ỤLỌ NCHE Ihe Ọhụụ Ndị E Gosiri Banyere Eluigwe Na-akụziri Anyị